I-Paris Hilton: I-Biography
UParis Hilton wazalelwa eMelika edolobheni laseNew York ngoFebhuwari 17, 1981. I-Paris - indodakazi endala kakhulu emndenini, ngaphandle kwakhe emndenini unodadewabo uNicky nabafowabo ababili uConrad noBaron. I-Hilton isibongo sithonya kakhulu futhi idume eMelika, umndeni ucebile, ngoba ngisho nokhokho omkhulu uParis wakha ihhotela laseHilton. Ungumzukulu kaConrad Hilton, owasungula ukhetho lwamahhotela eHilton.
Izingane zaseHilton zaqhutshelwa ezindaweni ezifana ne-ekhaya lomndeni waseNew York, Hampton, Beverly Hills ehhotela Waldorf Astoria eManhattan. UParis Hilton waphumelela eNew York Dwight School, wabe eseya ekolishi futhi waxoshwa. Kamuva, usafunda imfundo yesibili.
Ngesikhathi sokuqala uvele esikrinini esithombeni esisezingeni eliphansi lapho eseneminyaka engu-9 ubudala, lapho eneminyaka engu-9 ubudala, waphumula emsebenzini wakhe futhi waphindela ku-19, edlala e-movie ethi "Sweet Pie". Ngaphambi kokuba aqale umsebenzi we-model, bese kuthi umdlali wezemidlalo, wayaziwa ngendlela yokuphila ye-tusovka. I-Fox TV yamema u-Paris nodadewabo ukuthi bahlanganyele embukisweni we-TV "Life Simple". Udadewabo uNicky waphuma kule phrojekthi futhi uParis wamnika umngane wakhe oseduze uNicole Richie esikhundleni salokho. Emva kwalokho, wayedume kakhulu, ngenxa yokuhlanganyela kwakhe embukisweni wethelevishini "Life Simple".
Kulo mdlalo we-TV ngesikhathi sangempela kuboniswe ukuthi abesifazane ababili bezwe baya edolobheni elincane baqala ukuhlala epulazini elisemzaneni. Njalo ngesonto bafunda umsebenzi onzima futhi bahluleke. Ngaphezu kwalokho, iParis idlale emafilimu ambalwa ezindima ezincane. Waqhubeka nokusebenza ochungechungeni lwe-TV uNBC no-FO.
Ngo-2000, u-Hilton wasayina inkontileka ne-ejensi yokulinganisa futhi waba umklamo wezobuchwepheshe. Iqala ukuvela ekukhangiseni futhi ibonakale kumamagazini abomvu.
I-Paris idinga isikhwama sesikhwama, i-tennis kanye ne-yoga. Kanye nodadewabo uNicky unomugqa wokuhlobisa. Ngaphezu kwalokho, uHilton uhlanganyela emisebenzini yokusiza futhi kusiza izinhlangano ukuvikela izilwane.
Ngo-2004, u-Hilton waqala ukusebenza ku-albhamu yakhe "Paris", futhi ngo-2006 waqeda ukusebenza.
Kule filimu "indlu ye-Wax" iParis yadlala indima yePaige Edwards, okwakunqoba umklomelo. Ngo-2006, i-Paris Hilton emidlalweni emibili yadlala indima ezimbili eziyinhloko kumafilimu ethi "Phuza kuze kube phansi", "Blonde ushokoledi". Encwadini yesiRussia yefilimu ethi "The Blonde in Chocolate" ubizwa ngokuthi uKsenia Sobchak.
UParis uthe ufuna ukumisa ngemuva kokufa. Khona-ke wadlulisela imali enkulu kangangokuthi ososayensi bekusasa bangayivusa, futhi, njengoba kusho uParis, impilo yakhe izoqhubeka isikhathi eside izinkulungwane zeminyaka.
Ngo-2008, ifilimu ethi "Genetic Opera" kanye nefilimu ethi "Ubuhle nokudalwa okubi" yakhululwa, i-Paris Hilton yathola imiklomelo emi-3 ye-Raspberry Golden. UParis Hilton uhlala emadolobheni amabili - eLos Angeles naseNew York. Uyindlalifa yezigidi eziningi kusukela eMbusweni Wamahhotela eHilton. Yena izikhathi eziningana waba heroine of scandals ngokobulili, kwaholela umbukiso hit of celebrities ezigqoke okubi. I-Paris idale iqoqo lezinto zokucweba kanye nephunga elimangalisayo le-Paris Hilton Collection. U-Hilton wabhala futhi washicilela umlando wakhe, onesihloko esithi "Ukuvuma kweScuffleboy."
Umlingisi waseHollywood u-Anne Hathaway
UMarlene Dietrich biography
Iphumelela futhi iyakhaka uSnezhana Egorova
Ingxoxo no-Olga Budina
Ukupheka kwezisobho ezivela podberezovikov - iphunga lehlathi ekhishini lakho lasekhaya
Ungadla kanjani ama-citrus futhi ulahlekelwe isisindo: le mithetho engu-4 izokunika isibalo esifanele!
I-cream ye-face ene-protective factor against ray ultraviolet
Apple cider uviniga
Ingulube yengulube ene-orange-sauce yesardard
Indlela yokuxazulula izingxabano enhlanganweni?
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngo-10 kg: izindlela ezithandwa kakhulu futhi eziphumelelayo
Ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kokuvinjelwa ukudla: ukudla kudlula 60